Vaovao - Sino-Dental® 2021 Exhibitor Manual & Exhibiton forms
Sino-Dental® 2021 Exhibitor Manual & Exhibiton Forms
Amin'ny maha fampirantiana nify lehibe indrindra sy manan-kery indrindra ao Shina, Sino-Dental® nanjary fampisehoana nify manara-penitra, izay manana laza ambony na any Chine na any Azia. Hatramin'ny taona 2019, dia tontosa soa aman-tsara nandritra ny 24 taona. Nandritra ny roapolo taona lasa, Sino-Dental dia niezaka nampiditra sy nampiroborobo ny teknolojia sy ny vokatra efa mandroso; hanome sehatra ho an'ireo orinasa nify nasionaly sy iraisam-pirenena hanehoana sary, hampahafantarina ny mombamomba ny tsena, hianarana ireo haitao mandroso ary hamolavolana vokatra vaovao; hanomezana fotoana ahafahan'ny mpampiranty sy ireo matihanina mifampiresaka sy mifanakalo traikefa.
Sino-Dental® foana ny sehatra fandraharahana mety indrindra amin'ny fiaraha-miasa sy ny fizahana tsena mety. Maro amin'ireo mpampiranty eran'izao tontolo izao no mihevitra an'i Sino-Dental® ho safidiny voalohany any Shina amin'ny famoahana vokatra vaovao.
Amin'ny taona 2020, ny velaran'ny faritra anaovana fampirantiana dia 5.000 metatra toradroa ary trano heva 2 000 mahery. Mpampiratiana mihoatra ny 800 avy amin'ny firenena sy faritra 30 (toa an'i Shina, Alemana, Japon, Korea, Etazonia, Singapore, Brezila, Italia, France, UK, Suisse, Suède, Hong Kong, Taiwan sns.) No hanolotra ny vokatr'izy ireo ary fanompoana. Orinasa avy any Alemana, Etazonia, Japon, Korea, Brezila ary Soisa no hanatrika ny Pavilion nasionaly. Ny haitao sy ny haitao farany haitao, ary koa ireo vokatra sinoa tena tsara miaraka amin'ny vidiny sy serivisy mifaninana, dia haseho avokoa amin'ity sehatra ity.
Ankoatry ny fampirantiana vokatra sy teknolojia mahafinaritra asehon'ireo mpampiranty, seminera sy atrikasa akademika maherin'ny 300 no hatao mandritra ny vanim-potoanan'ny fampirantiana mba hampahafantarana ny fivoaran'ny fampianarana sy ny haitao farany havaozina amin'ny nify napetraka.
MPIVAROTANA eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena
Sino-Dental® nanjary vahaolana tokana ho an'ireo mpivarotra amin'ny fividianana vokatra. Ny International Dealers 'Lounge dia hisokatra manomboka amin'ny 10: 00-16: 00 amin'ny 9-11 Jona, izay natao manokana hananganana mpamokatra nify Shinoa lehibe hampiditra vokatra sy serivisy farany ary koa hanomezana fotoana lehibe hananganana fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny asa manerantany. Manentana ny mpitsidika izahay hanasa mpivarotra sy mpivarotra iraisam-pirenena bebe kokoa any Sino-Dental® amin'ny fanomezana trano onenana maimaim-poana mandritra ny 8-12 jona ho an'ilay afaka manasa vondrona 20.
Tongasoa eto Sino-Dental® 2021, izay hatao mandritra ny volana jona, 2021 ao amin'ny China National Convention Center (CNCC) • Beijing.
Daty fampirantiana: 9-12 Jun 2021
Toerana: China National Convention Center (CNCC), Beijing
Ho an'ny serivisy fampiratiana, azafady mifandraisa amin'ny komity mpikarakara:
Ramatoa Carol KANG (Chief Coordinator), Ramatoa Taylor XIN (serivisy Pavilion), Ramatoa Ying MA (Serivisy fampirantiana)
Mailaka: info@sinodent.com.cn / sino-dental@qq.com
Tel: + 86-10-88393917 / 3883/3850
Fax: + 86-10-88393924